Dacwadii Daciifka ahayd ee Xeer Illaalinta u cuskatay C/raxmaan C/shakuur Warsame – (Qodobada). – Shacabka News
Dacwadii Daciifka ahayd ee Xeer Illaalinta u cuskatay C/raxmaan C/shakuur Warsame – (Qodobada).
Dr. Axmed Cali Dahir Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa shalay ka hor yimid go’aankii lagu siidaayey Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo lagu soo eedeey fal dambiyeed Qiyaano Qaran iyo Qaran dumis.
Qodobka 36aad- Flagrante Delicto.
Qodobka 58aad– Baarista Guri ama Goob la tuhmay (Waaran La’aan).
Xeerkan waa mid ciidamada “booliiska” u fasaxaya inay sameyn karaan baaritaan iyagoo aan heysan (Waaran), balse waxaa shardi looga dhigay in baaritaankan loo maro xeerka 24 oo sheegaya in booliiska ay dadka su’aalo weydiin karaan, baaritaana sameyn karaan hadii aysan ka gaarin maxkamada Waaran ka helaan.
Waxaase shuruud looga sii dhigay in inta aysan hawl-galka dhicin laga rabo ciidanka booliiska inay fariin u diraan ama war-geliyaan Xeer illaalinta iyo waliba Maxkamada ku shuqulka leh.
Kadib markii ay baaritaanka sameeyaan ayaa laga doonayaa in ay si deg degleh maxkamada u horgeeyaan natiijada baaritaankooda.
Xeer illaaliyaha guud Axmed Cali Dahir Xeer oo shalay la waydiiyey sababta ay cadeymaha u horgeyn waayeen maxkamada ayaa ku dooday in kiiskan uu yahay kiis culus oo wakhti dheer qaadan kara, ayna xaq u leeyihiin inay wakhtigooda qaataan, doodaasi oo sharciyan ah mid aad daciif u ah.
Author Mohamed YarePosted on 22/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTA
Previous Previous post: Xildhibaan Mahad Salaad: 96 Xildhibaan ayaa Saxiixday Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha.
Next Next post: Wefdi uu hoggaaminaayo Wasiir Xoosh Jibriil oo Garoowe lagu soo dhaweeyey – (SAWIRO).